Dar Daaran Waalid: Iska Jir Isha Qorax Dhacaysa iyo Mid Soo Baxaysa! – Rasaasa News
Dar Daaran Waalid: Iska Jir Isha Qorax Dhacaysa iyo Mid Soo Baxaysa!
Mar 17, 2012 Dar Daaran Waalid: Iska Jir Falaadha Qorax Dhacaysa iyo Mid Soo Baxaysa!
Dardaaran waalid Aabe labo iska ilaali; falaadhaha mariidka leh ee qoraxa sii dhacaysa iyo mid soo baxaysa oo haday ku asiibaan aadan cifanayn aduun iyo aakhiro midna.
Eebow u naxariiso intii na dhashay dhimasho iyo nolol midka ay ku sugan yihiinba. Waalidku waa askunka, ababiyaha, ilaaliyaha, iftiinka aqoonta iyo uga digaha ubadkiisa nolosha aduunyada ee ay xumaan iyo wanaagba ku kulmaan.
Waxtarka waalidku ubadka u leeyahay warqad laguma koobi karo. Maanta waxaynu sharxaynaa murti muhiim ah oo waalid waa dardaaran uga tagay Ilmihiis, taas oo aan isleenahay way mudan tahay in la sheego.
Sida ciwaanka qormada ku qoran waa labo arimood oo muhiim ah oo waaliku kula dardaamay ilmihiisa, kuwaas oo ahaa sidan;
Aabo wiilkaygiiyow waligaa waxaad iska ilaalisaa isha ama inkaar kaaga timaada ruux gaboobay oo aan awood lahayn gaal iyo muslin midkii uu doono ha noqdeen [waa qorax casar gaadhay], ishoodu ama inkaartoodu ma dhul dhacdo oo deg deg baa loo arkaa.
Noloshu way ku gaaban tahay, suurto gal ma aha in 20 sano ka dib aad tidhaahdo iga cafi gafkii aan waagii kuu gaystay. Waa suurto gal in uu mudo gaaban ku xijaabto qofka wayn, dabadeedna aad garwaaqsato gafka aad gashay sanooyin dambe, kolka ay xaajo isku kaa qaban waydo xagee la iiga yimid waayeelkii aan waagii dhibay baa la iiga yimid in aad ku tiraabto.
Aabo wiilkaygiiyo waxaa kale oo aad waligaa iska ilaalisaa in ay ku nacdo caruur soo koraysa [waa qorax soo baxaysa], waxay wataan maskax cusub oo wanaag iyo xumaan wixii gala aan fudayd u iloobin, lama joojin karo oo waa cadceed soo baxaysa.
Ilmaha yar ee labaatan jirka kugu naca waxyeeladiisa lixdan jirka ayaad qomamaysaa. Xili aadan xoog lahayn oo aad u baahan tahay taageerada iyo gacan qabashada dadka kaa yar yar.
Dadka badankiisu waa indha ku garaadle in yar mooyee, mana sosho waanada waalidka, wacdiga wadaadka iyo dhamaan wax sheega wanaagsan, waxayna ku batalaqsadaan wax dhawaan dhibaato iyaga u leh.
Diinteena macaan ee Islaamka iyo dhaqanka suuban ee Somalida dadka in yar mooyee waxaad moodaan in ay qaateen erayada diinta Islamka iyo waanada dhaxal galka ah ee waalidku siiyey kiilkiisa waaga hore.
Dadka gaboobay Somalidu aad iyo aad ayey u ciseeyaan waxayna ugu yeedhaan xiliyada colaada biri ma gayday, waxaa kale oo ay hal ku dhag ka dhigtaan Cirada cid kale daayoo Cadaabka ayaa Ciseeya.
Somalida dhaqan waxaa u ah in dhalaanka yar yar ay dhool dhooliyaan, cadaan iyo madow kuu doono ha noqdee oo ay cadho la,aan kula dhaqmaan. Arintaasina waxay la xidhiidhaa diinta Islaamka iyo dhaqanka suuban ee Somalida.
Eebe waynow naga yeel kuwii ay waanada iyo wax sheegu dhagahooda Solaan, nagana ilaali dhibaato aan u gaysano waayeel gaboobay oo ay Ikaartiisu na asiibto.
Ebow aanaan ciilin caruur curdadana oo koraaya, kuwaas oo noo qaada cadho ay maalin nagu ciqaabaan.
Gudiga Jaaliyada Qatar oo Doortay Xubnaha Hogaaminta Jaaliyada